घरकै चामल खान मन्त्रीहरूलाई उर्दी – Palika Times
२६ कार्तिक, काठमाडौं । मन्त्रीहरुको आधा तलब काटिएपछि के खाने ? केले पाहुना पाल्ने ? कुरा त उठ्थ्यो होला । तर, कसैले मुख फोर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले उपाय पनि बताइदिएपछि अस्ति सोमबार साँझ ६ देखि ९ बजेसम्मको क्याबिनेट बैठकमा सबै चुपचाप रहे ।
अर्कातिर, यसअघि सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल पैँचो मागेको विषय पनि अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । पैँचोमा मल नआउने भएपछि सरकारले त्यहीँबाट सोही परिमाणको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
सत्ता संकट टार्न ओलीको अर्को चौथो अस्त्र